Nzira iyo Palantir data inotanga uye AI inofanotaura nezveramangwana rako makore mashomanana mberi: Martin Vrijland
Kuti unzwisise nzira yekurapa chirwere, unoda kunzwisisa chinangwa chechinetso. Kuti unzwisise nzira yekurwa nayo muvengi, unoda kumuziva uye kunzwisisa kuti ungadzivisa sei njodzi iri pedo, unofanirwa kunzwisisa kuti dambudziko iri chii. Saka iwe unotanga kuziva kuti njodzi inouya kwauri. Izvi zvinoshanda zvakare uye kunyanya kuAI (mazano ekudzidzira). IA yezvino yava kukwanisa kufanotaura nezveramangwana rako uye ndeyokuti inoshandisa nzira yakakwana. Iyo ndiyo nzira yekuseri kwe bitcoin, asi mutemo wekuti bitcoin wakabva pablochachain. Uye iyo blockchain inongova iyo internet 2.0.
Saka tinofanira kutaurirana zvishoma zvekombiyuta. Usanetseka, tinozvichengeta zviri nyore. Zvechokwadi, zvinoreva kuti internet yakareba yakave yakawanda sehutano hwepachivande sezvinobvira kubva kumabhangi nevatengesi vesevhisi (ISPs) vanotumira mapepa e data kune mamwe mashumiri. Munyaya yeIPs inoshanda seizvi: kana iwe ukashanyira webhusaiti, ipapo webhusaiti iyoyo ine imwe kero. Maserese ese mumutambo anoziva kuti kero uye PC yako inewo kero. A Domain Name Server (DNS server) inobatanidza zita rewebsite kune imwe kero ye IP. Kuti kero (uko panzvimbo uchida kushanyira), vari chakasvitswa kuti Server ane ISP unobvumira iwe nomukombiyuta Browser uye kunyatsotsvakurudza kuenda kero uye vachiridza Data kuti kombiyuta yako kana smartphone. Semuenzaniso, mabhengi anoita kuti magetsi avo aende kuburikidza ne-self-procured fiber optic network, kuitira kuti parege kuva nomunhu anogona kubatana nazvo. Izvo zvinowedzera zvakachengeteka.
Icho chinonzi blockchain chinonyanya kuchinja nzira yekuendesa migwagwa uye inowedzera kushanda kwairi. Iyo blockchain inonyanya kuita chikamu chakasiyana cheDNA code kana zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvePc PC imwe kana yefaira yose yakachenjera. Dhiyabhorosi haisisiri kushandiswa chete neIPs, asi mhando dzose dzemakombiyuta kana ma smartphone, sezvazvakaita, kubatana mune imwe huru, inotenderera. Saka apo kamwe akatungamirira ISPs kuongorora yatumira uye mugamuchiri, uye mashoko akanga akapfuura saizvozvo, iyo anomhanya ikozvino kuburikidza mamiriyoni interlinked kutigumbura zvose chinyorwa vose nedzimwe DNA bumbiro neimwe chinogumbura (kana fingapurindi) ari samambure . Pangoshandiswa deta kubva kubheji kusvika kuvhudzi, cheki inoitwa paDNA iyo yakasiyana. Kana chinogumbura ikaita zvitange data, uyewo anochinja fingapurindi uye chinogumbura maturo nekuti kuziva zvose mamwe inoperera zviri pomumbure kuti fingapurindi hakuchina kwakarurama. Saka iwe unogadzira nzira yekutakura yakachengeteka iyo isiri kana kuti haina kunyanya kushandiswa. (Tarisa vhidhiyo iri pasi apa inotsanangura muchidimbu uye woverenga pa).
Indaneti iri saka kushandurwa kubva nomumbure gadziriro chete nechepakati servers chero kombiyuta, chero site kana email address munyore IP kero uye tsamba-hurongwa chokuendesa mashoko omumasherufu ari ruoko kuisa kuburikidza maitiro kubva mamiriyoni mabhiriyoni (kombiyuta hurongwa) munyika yose. Izwi rekodhi rakachengetedza zvese kufamba kwepareji guru saka rinotsiviwa ne database yakachengetwa paPC imwe neimwe kana chipikisi chinoputika chipomputer. Munhu wose ari cubes pomumbure anoziva fingapurindi vose uye makombiyuta zvose uye namano pamwe dzinoumba zvichiongororwa hurongwa kuti achaongorora kuti fingapurindi kana DNA wokwavo ari kuchinja kubva misa chaivharidzira yatumira. Iwe ungati izvo zvinononoka kufamba mumugwagwa, asi iyo inongova nyaya yebhanwidth uye nhamba inowedzera yekubatanidza. Inoita kuti data inotakura zvisingabatsiri, nokuti - kana cubes yako ichida kugadzirisa deta - iwe unofanirwa kuita kuti makombiyuta ari munetaneti ave nokutenda kuti DNA inoenderana. Nokudaro iyo inowanzochengetwa nhengo ye blockchain, inochengeteka inova.
Inonzwika semamiriro akanaka uye akavimbika. Uye ndiyo ndiyo iyo inotengeswa. Iyo mhuka ndiyo chaiyo ndiyo yekutanga iyo yakashandisa kuchengetedzwa kwe blockchain. Saka, zviri bitcoin saka dzakakurumbira, nokuti zvechokwadi musimboti kunyoresa Database kuti 'mari' anobvisa kombiyuta mugadziriro nemabhengi chaizvoizvo inoita vose Network chikamu rudzi pamwe pamahombekombe, munhu wese ane wakaenzana ndivo mugove. Kana uine nhengo dzine chiuru, iwe unogadzira chikamu chikamu; kana uine nhengo imwechete bhiriyoni, iwe uchange uine chikamu chemabhiriyoni. Fananidzo haisi zvachose, nokuti iwe BitCoins "pondo" saka iwe uchiri kuwana chikuru danda riri pamwe, asi mwero inosimbiswa rakachengeteka kwema. Izvozvo zvinoita kuti blockchain inonyanya kufadza kutakura zvinhu. Bhuku re blockchain rinoratidzika risingabviri kukanganisa.
Chii chinowedzera "rubatsiro" rwebumbiro iri re blockchain? Isu tinoziva kuti blockchain inopa mimwe yeminwe yakasiyana-siyana yemutumisi wezvinyorwa zvose zvekutumira zvakatumirwa. Kana ini ndikatumira email kuburikidza ne blockchain panzvimbo yehutaneti hwevashandi vepa internet (ISPs), 100% yakachengeteka nokuti zvinyorwa zvisingagoni kuchinjwa. Bhokisi harigoni kuzarurirwa nehukama pamusoro penzira uye haigoni kuchinjwa. Saka tiri kutamira kune imwe nzira ye internet, apo ISP ichapedza kana kuwana basa risina kukosha. Indaneti inova inonzi "peer-to-peer network". Zvose zvinobatanidzwa kune munhu wose uye munhu wese anoziva munhu wese akazvinyora zvidimbu zvidhi. Saka rega nditenge yako motokari mu bitcoins uye kuti motokari yakagamuchira minwe yeminwe inobva kune fesheni. Zvadaro ndinotengesa motokari iyo pamusika kuburikidza ne bitcoin, ipapo muiti anogona kuona chaizvoizvo uyo ane motokari uye mutengi anogona chaizvo chaizvo avo vambove. Ndicho chikonzero isu zvino tinoonawo kuti muJapan the ACChain launched is. Iyi ndiyo nzira yekupa mishonga yose pasi rese imwechete code blockchain. Zvose zvichazobudiswa pasi rose zvichakurumidza kupiwa mukana we "blockchain" weminwe ". Uye iyo code ndiyo inopararira pamusoro pematombo ose muketani, kuitira kuti kode isigone kuchinjwa. kutenga bhasikoro aba muAmsterdam ichava nguva abolition Mari uye mukukunda crypto mari iri mari mubhengi, kuvazve nezvechisarudzo, nekuti yapfuura muridzi achagara kuzivikanwa uye kana bumbiro riri kubuda geflext, crypto mutengesi icharamba.
Iyo cryptocurrency inoratidzika kunge iri kupedzisa mari yekare yebhangi yemari, nokuti inobvisa simba kubva kumabhangi uye munhu wose anonyatsoita "mushandi" pamwe chete. Asi sezvakataurwa, avo vanonzi 'vanofambisa minda' vanotema vazhinji 'zvikamu'. Ndicho chikonzero iwe unoonawo kuti vanhu vakaita saPeter Thiel, muvambi wePayPal uye mabhiriyoniire, vanowedzera mari zvikuru mune ino teknolojia. Uye kana iwe uchifungidzira kuti musingazivikanisi muumbi we bitcoin, munhu asingazivikanwi ari iye amene Satoshi Nakamoto Anodana dzimwe nguva anogona kumirira boka umo akare mabhanga zvakakodzera kumiririrwa, ndiko chete pachena chaishanda simba uye pemahombekombe kuramba simba mugove pose nechigumbuso cheni yanana. Vakabva vataurira vanhu chirevo chekubhadhara kwakachengeteka kwese iyo munhu wese ari muridzi wemugove. Vakabva vanhu vaigona kubata soseji kuti simba kusuduruka uye mari kuti unogona kupfuma nokukurumidza, asi zvino chaizvoizvo pachivande roadmap kurutivi cashless vanhu nokukurumidza. Uyezve zvakare sangano risina chinangwa apo shanduro imwe neimwe inonyatsotevedzwa mumutambo usingabviri. Kwandiri kutanga kufunga iyo yakawanda yemakombiyuta inogona kutyisidzira, mutyairi wacho haachazofambi achienda nokukurumidza apo idzi makombiyuta anenge ave chikamu che blockchain.
Iye zvino unogona kushamisika kuti izvi zvose zvinorevei nezita rehurukuro ino. Zvakanaka, blockchain inoumba hwaro hwekuchengetedzwa nekuchengetedzwa kwekutsvaga kwepasi pose. Ndizvo, sezvazviri, internet 2.0. Ikoko yakanga iri yekutanga kushandiswa kwe blockchain, asi chaizvoizvo teknolojia yava kushandiswa pasi rose pane zvose zvaunogona kufunga. Iwe unogona kupa kunyange mbeu uye fodya kana kuti yakawanda yekunyora doro mune girazi rewaini imwe chete yekodhi. Ndiyo kurota kwakadzika kwemakambani akadai Bayer naMonsanto (kana kuti ndiyo iyo nzira zvakafanana?), asi ihwowo nderokurota kweBad Data. Uye ichi ndicho chikonzero datacenter yakavakwa muSaudi Arabia pamwe nekubatsirana, semuenzaniso, CIA nemhando dzose dzevashandi vakuru ( Peter Thiel) iyo yakatogadzirira izvi 2.0 internet. Asi zvekuti zvinogonawo kushandisa "yekare internet". Iyi Palantir data inogona kunge yakatova neyokuwana yakawanda yemakombiyuta, kunyange vachiita saizvozvo kuramba pachena. Palantir inounganidza zvose data pamusoro pezvinhu zvose uye munhu wose kubva kare uye kubva panguva ino.
Kunakisa chinogumbura Chain michina sezvo wakatangwa bitcoin, ndiko kuti kudiwa 'mamaina' yakabuda uye kudiwa pane makambani akawanda uye vanhu vanopedzisira zvose zvikuru makombiyuta. All izvi makombiyuta vava chikamu chinogumbura cheni mambure kadambari simba rose izvi makombiyuta inowanikwa akazara network. Izvozvo zvinoreva kuti sezvo bhenji re blockchain richikura, kubatana kwekombiyuta inowedzera. Enzanisa pamwe kuedza chakaitwa 3 tsoko akazviratidza kuva pamwe akangwara kuburikidza uropi kubatana (ona pano).
Uchenjeri huripo hunoenda muPalantir data centre unounganidza mashoko ose neIndaneti 1.0 uye internet 2.0 (network block). Kubva kune zvose izvozvi ruzivo rwepfungwa hunogadzirwa nemunhu mumwe nomumwe. Izvi hazvisi kuitwa nevanyori mushure mekunyora magetsi uye dawati rine mavara akawandisa mapepa. Aiwa, izvi zvinoitwa kuburikidza nehuwandu hwemagadzirirwo anodzidza uye anowedzera kuchenjera nekuda kwekukura kwekombiyuta mubato re blockchain. Icho chinangwa chekugadzirira chinowedzera uye chinokurumidza zuva rega rega. Uye kuburikidza nokuongororwa kwezvinhu zvose izvi, tinotarisa maitiro mumatauriro enyu. Hongu, izvozvo zvinoitwa nevanhu vose pasi rose. Ndicho chikonzero izvi zvose mitemo yemashiripiti yaifanira kusvika pasi pechikonzero che'kugandanga '. Uye saka tinotarisa nhoroondo yako mumarudzi ese. Mazuva ako okutanga kuchikoro, data yako yekondari, yunivhesiti yawakatevera. Social interaction; your network; kutenga kwako tsika; nguva yako kushandisa.
"Asi vose vanoita sei izvozvo?"Iwe wakambofunga nezvei nei masangano akawanda akafanirwa kugadzirisa hutungamiri hwavo? Zvose izvi dhaka zvinokumbirwa uye zvinoshandiswa naParantir. Izwi refoni yako ikozvino rinokupa zvose pamusoro peawa 24 pazuva. Palantir ine ruzivo rwekodzero dzawakanyora pawakamisa Facebook kana WhatsApp app, kuitira kuti inogona kubata maikrofoni nekhamera ye smartphone yako nguva dzose uye inoteerera. Muguta raunogara, kune khamera mune imwe shopu kana mumugwagwa. Nzira yako yekutenga inogona kuongororwa; kunyange kana iwe mari nokuda mari (rekukwazisa kamera pamusorosoro mari remazita ichimuremera AI anoona chiso chako). Uye kubva pane zvose izvozvi maitiro kubva munhoroondo uye zvino, AI inodzidza. Inodzidzawo pamwe chete kubva kune umwe neumwe. Iwe unoshandisa Facebook nedzimwe nharaunda; iwe unotarisa internet; Vabereki vako vanewo Facebook; vana vako vanoshandisa Instagram uye Snapchat. Saka anogona kufanotaura kunobva Profile wako sei vana venyu kuzvibata uye vanotarira kufanana pavanenge vakura kunyange sei. Unhu hwako hunofanirwa kuitika uye hunogona kuchinja. Uye kana uchifunga iri figment ane aizivikanwa vakarangana anofunga, I kureva pano kuti nyaya July 30 2017 muBritish mupepanhau The Guardian, iyo pano iri pfupiso:
Kushandisa nhepfenyuro yakanyanya kudhindwa kwemigodhi, Palantir inogona kufanotaura remangwana, masekondi kana makore zvisati zvaitika.
Zvino tinoziva isu 24 awa 7 mazuva pavhiki kushora uye chinogumbura cheni internet access uye paIndaneti zvinhu "akawedzera kuti kuwedzera bandwidth Indaneti kushandisa michina sezvo 5G network kuva huru unotyisidzira rusununguko rwedu uye kuwedzera izvi kukuti AI inokwanisa kufanotaura maitiro edu, tinogona kungogumisa kuti tave takaguma mumusangano wepasi pose unowedzera. The blockchain inoita kuti web iwedzere yakasimba uye yakanaka-meshed. Zvichida simba idzva mafomu sezvinotsanangurwa ichi chinyorwa, kuve nechokwadi chokuti kushungurudzika kweiyo internet 2.0 kuve kudiki uye kuduku. Kana tikatarisa zviitiko kubva ku nanotechnology, uropi hunodiwa hunodiwa naElon Musk huri nani kuwedzera pakukura kweAI ruzivo. Uye isu tinotarisa matanho anowanikwa mumunda weDNA kushandiswa kuburikidza neCISPR nedzimwe nzira, saka tinoenda zvakanyatsoenderera mberi kune vanotungamirirwa, vanogadzirisa vanhu. Isu tinozoenda kune kubatana kwevanhu vane AI, panguva iyo iyo AI inogona kukwanisa kufanotaura kuti zvipi zvatinosarudza panguva iyoyo. Saka zvinoita sokuti kuwedzera kuoma kutiza iyo AI. Hungu, AI uye nanotechnology (uye iyo yakagadzirwa nebiootechnology) inoita seinoita zvinhu zvakawanda zvinobatsira kwatiri, zvakadai sekugadzirisa matambudziko seTretrette (ona pano) kana - munguva yemberi iri pedyo-kuwedzera huro hwedu hwehutano mumakore (ona pano), asi kutorwa nebhangi tinogona kutaura kuti AI (uye kubatana nayo) inoisa dambudziko kune isu tiri mune zvakadzama. Icho chinotyisa kumunhu; nokuda 'kuva' uye nokuda kwezvakanakira kuti isu tiri ani: mweya isina rusununguko.
Ndicho chikonzero nguva yakaita seyo yasvika - ikozvino tave takarongedza njodzi nenzira yakakodzera zvakanaka-kutaura pamusoro pezvatinogona kuita. Inguva yekutaura pamusoro pemhinduro. Pamusoro pehurukuro yangu inotevera.
Source chinyorwa listings: acchain.org, ad.nl, theintercept.com, coindesk.com, theguardian.com
Mugumo wekusava neutongerwe enyika US ichaita nzira yekuchengeteka kwepa internet blockchain: internet 2.0
Tags: ai, bitcoin, blockchain, Featured, njere yekufunga, Palantir, nditarisise-to-vezera, ramangwana, inofanotaura
Ed the Thinker akanyora kuti:
6 December 2017 pa 14: 12
"Inguva yekutaura nezvemasarudzo."
Klink (achiripo) ane tariro chaizvo ...
6 December 2017 pa 14: 59
MuNetherlands vanhu vanofanira kutanga kufunga nezvekuti sei fiber kusimba iri kuwedzera uye nei zvikuru zvemashoko eAlfabheti (Google) ari kuvhurwa kuchamhembe (Groningen) yenyika? Nei zvigadzirwa zve SMART zvose zviri kuwedzera? Uye nei kuri kuedza kuFriesland neGroningen nemishumo ye5G (V2K), zvichiita kuti varimi vaone kuti tsika dzinochinja (kutya) dzinoitika mumhou, pakati pevamwe?
Uyezve, sei munhu Bilderberger mudzimai uye 'nyore' alderman, uyewo chipangamazano Prime Minister mashoma mwedzi, akaita akakwira 'kujeka' nzvimbo mune Regional zvematongerwo enyika kuti National nezvenzvimbo Deputy Prime Minister uye Interior Minister ? Izvi mushure mokunge apinda musangano we Bilder Bilder apo pasina mambo, gurukota, Peter Thiel, Alex Karp nevamwe vakange varipo. Pane chirongwa, chiedza chinoenderera mberi here?
Ndivanaani vanomiririra ...?
6 December 2017 pa 22: 27
Zvinomiririra nyoka, ukama hwenyika yepasi uye ziso rose rinoona.
7 December 2017 pa 08: 38
Martin, chii chinogona kutengesa misika kunyoreswa kana kuti zvimedu zvakabiwa?
7 December 2017 pa 10: 12
Nemhaka yokuti nzvimbo idzi dzemashamba dzinongomhanyira pane web server uye web server iyo inochengetedza chikwama ichiri kungotorwa. Saka mhuka haina kubviswa, asi maneja we bitcoinwallets (rudzi rwemupakati). Chero apo kugoverwa kuchaonekwawo nenzira ye blockchain iyo ichavawo nheyo yakachengeteka.
7 December 2017 pa 10: 16
Tichazoonawo kuti iyi ihwowo dambudziko iro sarudzo ichakurumidza kupiwa. Chimwe chezvi: gadzirisa bitcoinwallet yako uye uganise iris yako scan uye uso hwekuona ku smartphone yako. Zvinonyanya kuve nyore kana iwe une chip mukati mumuviri wako.
7 December 2017 pa 09: 20
MuNetherlands isu tinewo CAS system inoita zvakafanana nePalentir kubva kuNetherlands uye zvichida yose iyo data inowanikwa nePalentir. Usafunga ikozvino kuti ichi chinhu "kure kure pano". Nyika yeNetherlands iri kumhanya mumutsara wepamberi.
« Hazvina mhosva kuti chii chinoitika, vanhu vanoramba vasina bofu kumamiriro avo arimo
Iye zvino zvatinoziva chinetso chacho, chii chinogadzirisa? »
Total Visits: 15.875.664
SandinG op Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey
Wilfred Bakker op Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey
Wilfred Bakker op Transgender murume anozvara mwana asiriye wemubinji wemwana wemurume nemukadzi anouraya mbeu